खेलकुद Archives - खबर मलाई
८ भाद्र २०७६, आईतवार ८ भाद्र २०७६, आईतवार खबर मलाईLeaveaComment on खेलाडी कसरी छान्ने ? विराटलाई गांगुलीको सुझाव
काठमाडौं । मोहम्मद सलाहको दुई गोलसँगै लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा आर्सनलमाथि सहज जित हात पारेको छ । शनिबार भएको खेलमा लिभरपुलले आर्सनललाई ३–१ गोल अन्तरले हराएको हो । एन्फिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले पहिलो हाफको अन्त्यतिर जोइल माटिपको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । दोस्रो हाफको सरुमा लिभरपुलले पेनाल्टी पायो, जसमा सलाह चुकेनन् । खेलको ५८ औं मिनेटमा उनले […]
एजेन्सी । युभेन्टसका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले फुटबल करियरबाट संन्यास लिनेबारे नयाँ कुरा बताएका छन् । उनले अर्काे वर्ष सम्म संन्यास नलिए ४० वर्षसम्म खेल्ने बताएका छन् । ‘टिभीआई’सँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो फुटबल जीवनको अन्त्य अर्काे वर्ष पनि हुन सक्ने वा ४० वर्षसम्म पनि चल्न सक्ने बताए । ३४ वर्षीय पोर्चुगेली स्टार खेलाडी रोनाल्डो गएको […]
१ भाद्र २०७६, आईतवार १ भाद्र २०७६, आईतवार खबर मलाईLeaveaComment on आइतबार पीएसजी र रेन्सबीच भिडन्त, टोलीमा परेनन् नेमार
फ्रेन्च लिग वानमा आइतबार राति साविक विजेता पीएसजी र रेन्स क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पीएसजी र रेन्सबीचको खेल आइतबार राति पौने १ बजे रेन्सको घरेलु मैदानमा हुनेछ। पीएसजीले सिजनको दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। सुरुवाती खेलमा नेमार टोलीमा अटाएका थिएनन्। आजको खेलमा समेत नेमार टोलीमा नपरेको प्रशिक्षक टोमस टुचलले बताएका छन्। उनले नेमार यस खेलमा लागि […]
२७ श्रावण २०७६, सोमबार २७ श्रावण २०७६, सोमबार खबर मलाईLeaveaComment on चेल्सीलाई युनाइटेडको झट्का
एजेन्सी । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीलाई म्यानचेस्टर युनाईटेडको नमिठो झट्का लागेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले चेल्सीलाई ४–० गोलले हरायो । घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा युनाईटेडलाई जिताउन मार्कस रास्फोर्डले दुई गोल गरे । एन्थोनी मार्सियल र ड्यानियल जेम्सले एक एक गोल गरेका थिए । रास्फोर्डले १८औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत सुरुवाती गोल गरेका […]
काठमाण्डौ – सरकारले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गर्नु भएको हो । आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको चालु आर्थिक वर्षको खेलकुद भौतिक पूर्वाधार तथा योजनासम्बन्धी मन्त्री विश्वकर्माले यस्तो बताउनु भएको हो । […]
आईसीसीकाे प्रतिबन्धपछि जिम्बाब्वेका खेलाडीहरु सित्तैमा खेल्न तयार !
१५ श्रावण २०७६, बुधबार १५ श्रावण २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on आईसीसीकाे प्रतिबन्धपछि जिम्बाब्वेका खेलाडीहरु सित्तैमा खेल्न तयार !
जिम्बाब्वेका खेलाडीहरुले आफ्नो देशको क्रिकेट जोगाउनका लागि सित्तैमा खेल्न तयार रहेको बताएका छन् । आईसीसीले हालै जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई निलम्बन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आईसीसीको आउँदो टी-२० क्वालिफायरका लागि सित्तैमा खेल्न खेलाडीहरु तयार रहेको खबर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । महिलाको टी-२० क्वालिफायर अगस्ट र पुरुषको क्वालिफायर अक्टोबरमा हुँदैछ । आईसीसीले […]
३१ असार २०७६, मंगलवार ३१ असार २०७६, मंगलवार खबर मलाईLeaveaComment on केनको कप्तानीमा विश्व ११ टोली
एजेन्सी-आईसीसीले इङ्ल्यान्डमा सम्पन्न एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ अर्थात् विश्व ११ खेलाडी टोली सार्वजनिक गरेको छ । आईसीसीले सोमबार न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनको कप्तानीमा ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक गरेको हो । टोलीमा इङयान्डका सर्वाधिक चार, न्युजिल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र भारतको दुई दुई खेलाडी परेका छन् । बंगलादेशका एक खेलाडी परेका छन् । टोलीमा […]
मेस्सीले उत्कृष्ट खेलाडी हुँदाको मूल्य चुकाउनु पर्‍यो
३ असार २०७६, मंगलवार ३ असार २०७६, मंगलवार खबर मलाईLeaveaComment on मेस्सीले उत्कृष्ट खेलाडी हुँदाको मूल्य चुकाउनु पर्‍यो
कोलम्बियाका कप्तान राडामेल फाल्काओले अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीको बचाउ गरेका छन् । कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा कोलम्बियाले अर्जेन्टिनालाई २–० ले हराएको थियो । सोमबार बिहानको खेलमा पराजित भएपछि केही मेस्सीको आलोचना गरिरहेका छन् । तर मेस्सीले विश्वको उत्कृष्ट खेलाडी हुँदाको मूल्य चुकाएको फाल्काओले बताएका छन् । फाल्काओले भने, ‘मेस्सीले हामीसँगको खेलमा […]
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on कर्णालीलाई २२९ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । सिद्धान्त लोहनीले अर्धशतक बनाएपछि प्रदेश नम्बर एकले जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशविरुद्ध २ सय २९ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर एकले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २ सय २८ रन बनाएको हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा प्रदेश एकका लागि घाइते […]
एजेन्सी । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरू हुन अब १३ दिन बाँकी छ । इङल्याण्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुन लागेको विश्वकप करीब ४६ दिनसम्म चल्नेछ । ११ स्थानमा सञ्‍चालन हुने विश्वकपमा लिग चरणअन्तगर्त ४५ खेल हुनेछन् । जेठ १६ गतेबाट सञ्‍चालन हुने लिगको उपाधि भिडन्त असार २९ गते हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताबाट […]